Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, GreenPlains abụrụla China na-eduga na ụwa a ma ama ogbugba mmiri n'ubi ngwaahịa Nsukka. Na ubi nke ngwaahịa ogbugba mmiri n'ubi, GreenPlains eguzobewo nkà na ụzụ ya na uru ya. Karịsịa n'ọhịa nke valvụ PVC, Myọcha, Ndị ọkwọ ụgbọala, na Mini Valves na Fittings, GreenPlains abụrụla otu n'ime ndị China na-eduga.
GreenPlains bụ ọkachamara na R&D, mmepụta, na ahịa nke ngwaahịa ogbugba mmiri. Mmeputa ihe nwere ihe kariri 400 ebu. Mmepụta gụnyere PVC Ball Valves, PVC Butterfly Valves, PVC Check Valves, Valkwụ Valves, Hydraulic Control Valves, Valve Air, Filter, Drippers, Sprinklers, Drip tape, na Mini Valves, Fittings, Clamp Saddle, Fatịlaịza Injectors Venturi, PVC LayFlat Hose na Fittings, Ngwaọrụ na ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ. Ọtụtụ ngwaahịa na teknụzụ enwetawo ikikere mba.
Otú Anyị Si Emeri
Professional R & D otu, anyị na-enye onye-nkwụsị ọrụ site na ngwaahịa imewe, ebu imewe & ewu ka ngwaahịa rụpụta;
Anyị enwetara asambodo asambodo ISO9001 nke ọma n’aka SGS. Anyị ruru eru na usoro nlekọta njikwa na ndị ọkachamara njikwa. Anyị nyochaa na soro dum usoro si PO a pụrụ isi chọta ka ibu nnyefe maka ọ bụla iji via ERP, MES, akụkụ ụlọ nkwakọba ihe management system, na ISO9001 àgwà usoro; anyị na-achịkwa ogo nke ngwaahịa ọ bụla ma nye ngwaahịa na ọrụ dị oke ọnụ ahịa maka ndị ahịa anyị n'ụwa niile.